Abakhiqizi Bomoya Bomoya Omningi | I-China i-Vililated Bulk Bag Factory & Abahlinzeki
Izikhwama zamazambane ezinomoya zikhiqiza indawo efanelekayo yazo zonke izinhlobo zemikhiqizo edinga ukugeleza komoya ngendwangu esikhwameni. Ukuze kugcinwe kuphephe futhi kuthuthwe, lezi zikhwama zingavimbela imikhiqizo ekonakaleni ngomswakama nesikhunta. Ngakolunye uhlangothi, lezi zikhwama zilungele ukuphatha, ukugcina kanye nokuhambisa.
Umoya Bulk Bag HV62
Izikhwama zenqwaba yomoya zenziwe nge-virgin PP, ezinye zazo zihlanganiswe nenetha. Zithandwa kakhulu kwezolimo ukugcina noma ukuguqula imifino ngoba zingakhuthaza ukuhamba komoya nokuphefumula kwemikhiqizo.
Sivamise ukuba nezinkulungwane eziningana zalezi Izikhwama Zomoya Omningi ezitholakalayo. Isikhwama Esinomoya Omningi sivumela ukugeleza komoya ungene kumkhiqizo ophethwe esikhwameni.